Faa'iidooyinka qaxwada: dhammaan sirta saaxiibadaada subaxnimo | Ragga Stylish
Waa wax caadi ah in aroortii la aado, laakiin miyaad ogtahay dhammaan faa'iidooyinka kafeega? Maxay cabitaankan, oo in ka badan 1000 kiimiko oo kala duwan laga helay, caafimaadkaaga u qaban karaa?
Aan aragno waxa ka dhalan kara isticmaalka qaxwada joogtada ah ee jirka. Haddii aad tahay mid ka mid ah taageerayaasha badan ee leh cabitaankan adduunka oo idil, hubaal waxaad ka heli doontaa mid aad u xiiso badan.
1 Sababaha loo cabbo kafeega
1.3 Cudurka wadnaha iyo beerka
1.4 Caadooyinka waxyeelada u leh caafimaadka
1.8 Faa'iidooyin badan oo kafee ah
Sababaha loo cabbo kafeega
Marka la fiiriyo caannimada weyn, ma aha wax lala yaabo in kafeega lagu sameeyo cilmi baaris ballaaran.. Waxa saynisyahannadu ogaadeen inay kugu noqon doonto lama filaan, maxaa yeelay gunaanadka daraasaddan qaarkood waxay muujinayaan in kafeega uusan u dhaqmin oo keliya inuu yahay kiciye (wax in badan la isticmaali karo, oo aan ahayn subaxda oo keliya) Waxay kaloo caawin kartaa ka hortag cuduro badan.
Mid ka mid ah waxyaalaha qarsoodiga ah ee ka faa'iideysan kara qaxwada waxay ku jiri doontaa awooddiisa la dagaallanka xag-jirrada xorta ah, kaas oo jirkaaga ka gala cuntada qaarkood, iyo sidoo kale marka falaaraha qorraxdu ay taabtaan maqaarkaaga. Marka la soo koobo, ma jiro wax baxsad ah. Laakiin, nasiib wanaag, kafeega waa mid ka mid ah xulashooyinka cuntada ee kaa caawin kara arrintaan muhiimka ah.
Cabitaankuna waa mid na khuseeya munaasabaddan waxay ku siineysaa antioxidants ka ilaaliya xagjirnimada bilaashka ah, iyaga oo ka horjoogsanaya inay maraan jidkooda oo ay ku dhammaadaan waxyeellada unugyada jirkaaga, taas oo horseedaysa horumarinta cudurrada, wax dabiici ah qofna ma doonayo. Si kastaba ha noqotee, xiriir sababi-saameyn wali lama helin, sidaas Waxaa macquul ah in faa'iidooyinkaan ay sabab u yihiin arrimo aan ka ahayn isticmaalka kafeega.
Cilmi baaris ayaa muujisay in dadka cabba bunka ay u badan tahay in uusan ku dhicin cudurka macaanka nooca 2aad. Waxaa u muuqda inay jirto sunta ka hortagga jirka ee kafeega oo ka caawinaysa in sonkorta dhiigu hoos u dhigto oo xasillooni yeelato.
Cudurka 'Parkinson's' waa cudur aad u daran oo, ka dib markii uu weeraro unugyada neerfaha ee maskaxda, ka celiya bukaanka inuu si caadi ah u dhaqaaqo. Waxaa jira daraasado isku xira kafeega iyo gargaarka astaamaha ugu horreeya ee cudurka Parkinson. Cilmi-baaris kale ayaa sii socota, oo soo jeedinaysa in kafeega uu gacan ka geysanayo kahortagga horumarinta cudurkan.
Cudurka wadnaha iyo beerka
Xiriirka kafeega iyo wadnaha waa mid adag. Hal shay, waxay umuuqataa inay waxyeello u leedahay dadka qaba cudurka wadnaha. Taa baddalkeeda, cilmi-baaris kale waxay muujineysaa inay dhab ahaantii gacan ka geysan karto ka hortagga. Faa'iidooyinka qaxwaha ee wadnaha waxaa u sabab ah taas waxay kaa caawineysaa yareynta halista huurada ku timaadda xididdada dhiigga, ee dhiigga u qaada wadnaha.
Waxay noqon laheyd wax la yaab leh hadii qaxwaha u fiicnaado beerka sidoo kale, sax? Hagaag, qaar waxay dhahaan, runti, waa. Haddii aad ka mid tahay kuwa aan hoos uga dhicin seddex koob maalintii, baaritaannada qaarkood ayaa si otomaatig ah kuu siiya u yar tahay inuu ku dhaco cudurka beerka, cirrhosis, iyo xitaa kansarka beerka. Tani waa war aad u fiican, maadaama jidhkani aad muhiim u yahay.
Caadooyinka waxyeelada u leh caafimaadka
Fiiri maqaalka: Waxyaabaha saameeya caafimaadka. Halkaas waxaad ka heli doontaa caadooyinka maalinlaha ah ee ay tahay inaad iska ilaaliso si ay jidhkaaga uga caawiyaan kahortagga cudurrada oo aad ugu sii ekaato qaabka ugu sarreeya muddo dheer
Faalig wuxuu ku dhacaa marka dhiiggu uusan geli karin meel maskaxda ka mid ah. Cab koob bun ah maalin kasta ayaa yareyn kara halista istaroogga sababo la xiriira faa'iidooyinka ay u leedahay caabuqa iyo heerarka sonkorta dhiigga. Cabitaan kale oo aad u xiiso badan si loo yareeyo qatarta istaroogga waa shaaha madow. Xaaladdan oo kale, maxaa yeelay waxay yareyn laheyd cadaadiska dhiigga, kaas oo, markii uu aad u sarreeyo, isu beddelo qatar.
Waxaa jira ikhtiyaarro cunto oo badan oo kaa caawin kara kahortagga kansarka. Waa waxa loo yaqaan cuntooyinka lidka ku ah kansarka. Hagaag, kafeega badanaa waa lagu soo daraa. taajirnimadeeda awgeed.
Cudurkan, oo sababa xusuus beel iyo dhibaatooyin dabeecadeed, iyo astaamo kale, ayaa hadda lagu hayaa daraasado fara badan maxaa yeelay waxaa jira malaayiin kiis oo adduunka ah. Waxaa jira natiijooyin aad u rajo badan, laakiin nasiib darro wax daawo ah lama helin illaa iyo hadda. Mid ka mid ah natiijooyinkaas oo kaa dhigaya inaadan lumin rajada waxay la xiriirtaa kafeega. Sida muuqata, cabitaankani wuxuu caawiyaa ilaalinta neerfaha mahadsanid, markale, antioxidants.
Faa'iidooyin badan oo kafee ah
Kafee sidoo kale wuu ku caawin karaa:
Iska yaree khatarta dhagaxaanta xameetida
Dhinaca kale, kafeeku wuxuu yeelan karaa cilado. Ku-takri-falka kafeynta waxay kuu horseedi kartaa walaac iyo xanaaq, iyo sidoo kale dhibaato hurdo la'aan. Waxay sidoo kale faragalin kartaa nuugista kaalshiyamka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Faa'iidooyinka kafeega